Ndepu ikike maka WordPress | Martech Zone
Wednesday, February 29, 2012 Fraịde, Septemba 27, 2013 Douglas Karr
Anọ m na-eti ụlọ ọrụ ọ bụla amaara m uru ikike edemede nke Google ewetaworo n'ahịa. Ahụla m mmụba dị ukwuu na ntinye-pịa na peeji nsonaazụ njin ọchụchọ anyị yana ndị na - agụ akwụkwọ anyị. Ike gwụrụ m ikwu ya? Ọfọn, ọ dị mfe ugbu a iji mee ka njirimara edemede na WordPress nwee ekele maka ngwa mgbakwunye na-enweghị atụ, akpọrọ Onye edemede.
Ngwaọrụ ha na-enye atụmatụ niile dị mkpa… na mgbakwunye na ndị ole na ole ndị mara mma - gụnyere ibipụta akwụkwọ gị bios na blog posts, formatting a great author page, na mbipụta ọgaranya snippets. Ihe mgbakwunye ahụ na-arụ ọrụ blọọgụ ọtụtụ-ede akwụkwọ.
Anyị edeela ọtụtụ koodu wee nwee ike ịhazi isiokwu WordPress anyị iji mee ka ihe a niile mee… M chọrọ ka anyị nwee ngwa mgbakwunye a mgbe ahụ! Nke a bụ ụfọdụ nseta ihuenyo sitere na saịtị ha nke gosipụtara atụmatụ dị iche iche:
Ọ bụrụ n’itinyebeghị ngwa ọ bụla edemede ọ bụla rship mee ya ugbu a! Na ijide n'aka na ikpu ndi folks na AuthorSure maka iru oru di egwu a. Ugbu a, anyị kwesịrị ịrụ ọrụ n'ịhapụ ụfọdụ koodu anyị ka anyị wee nwee ike iji ngwa mgbakwunye a!
Tags: edemede ngwa mgbakwunyeedemede ngwa mgbakwunye maka wordpressedemedewordPress odee ngwa mgbakwunye
Daalụ maka ịkọwa ngwa mgbakwunye AuthorSure - naanị ịsị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịnwale ya anyị na-enyere ndị mmadụ aka ugbu a ịtọlite.
Ọ dị mfe ịrapara ma ọ bụrụ na isiokwu gị na-agba mbọ ịme akara edemede na nkwenye na nnọchite gị, ma ọ bụ nsogbu ọzọ anyị hụrụ bụ mgbe ndị mmadụ gbalịrị ịme akara ahụ yana maka ihe kpatara na ọ rụbeghị ọrụ, mgbe ahụ ha na-anwa ịgbakwunye ngwa mgbakwunye. Have ga-ehichapụ ihe niile ị gbalịrị tupu ị wụnye. Agbanyeghị - anyị ga - enyere aka ma ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ aka.
Chris Hamilton bụ
Daalụ maka ịkekọrịta nke a. Ahụrụ m Onye Ọchịchị Google ka ọ na-arụ ọrụ ma na-eche etu esi enweta ya. Ugbu a ka m matara.
Enwere m ekele.